Ingxenye: Psychology 2022 Julayi
Psychology 2022, Julayi
Indoda yami iyahaha noma cha - kanjani ukunquma? Izenzo Zakhe Eziyisi-7 Ezingenakuthethelelwa (2022)
Uma ungafuni ukuba nobuhlobo nendoda ehahayo, udinga ukunaka ezinye izinto ezincane ezinsukwini zokuqala zokwazana. Ngezibonakaliso ezithile, unganquma kalula ukuthi umnumzane wakho uthambekele ekuhaha
Amakhono ayi-7 okufanele uwafunde ngaphambi kokuqala ubudlelwano obusha (2022)
I-TOP 5 inkohliso lapho sekuyisikhathi sokuhlukana nayo lapho uneminyaka engama-30 (2022)
Ukuphila kufushane kakhulu ukuba kungachithwa ngokudla, amadoda ahahayo, nemizwelo emibi. Kodwa lokhu akulona uhlu oluphelele - kukhona futhi inkohliso okufanele kushiwo
Imibuzo emi-5 ephezulu okufanele abantu abashadile bazibuze yona ngaphambi kokuba babe nomntwana (2022)
Ungashintsha kanjani yonke into lapho usuzuze okuthile, kodwa ungazizwa ujabule (2022)
Izazi zokusebenza kwengqondo ziqinisekile ukuthi ngokoqobo wonke umuntu angakwazi ukushintsha ukuphila kwakhe futhi azizwe ejabule. Ukuze wenze lokhu, udinga okuncane kakhulu - lalela izeluleko ezivela esihlokweni sethu bese uqala ukuzisebenzisa empilweni yakho
Izihloko eziyisi-6 ezingemukeleki kulabo abasanda kuqala ubudlelwano (2022)
Ukuqala kobudlelwane yinkathi enzima kakhulu, nakuba imnandi kakhulu kowesilisa nowesifazane. Isazi sokusebenza kwengqondo u-Iraida Aseni utshele ukuthi ungakhuluma kanjani nendoda ekuqaleni kobudlelwane ukuze ungonakalisi kusukela ekuqaleni
Ukuze uthole umsebenzi hhayi kuphela: indlela yokufunda ukukhuluma kahle futhi kahle (2022)
U-Shalva Amonashvili: "Izingane zifuna ukukhululeka, zinikeze le nkululeko, kodwa zihlakaniphile, inkululeko ehlakaniphile" (2022)
Engxoxweni nomshicileli othi "Edinstvennaya" u-Inna Katyushchenko wephrojekthi ye-Connecting Women, u-Shalva Amonashvili ukhulume ngezimiso eziyisisekelo zokufundisa abantu kanye nezimo zengqondo eziyinhloko ebubaba nasemndenini
Injabulo, ubuhlungu, ukuhlupheka: ukuthi ungaba kanjani nokuthi wenzeni ngakho (2022)
6 imikhuba emibi okufanele uyilahle: funda ukuthi ungayenza kanjani (2022)
Indlela yokwanelisa umlingani wakho embhedeni: landela iseluleko se-sexologist (2022)
Ukwanelisa indoda embhedeni, ukuqonda amasu ocansi kuphela ngeke kwanele. Ukuze wenze lokhu, udinga ukumvula, ukumjabulisa, ukudlala naye, ukumphulula nokumangala njalo
Ungayishintsha kanjani impilo yakho ezinsukwini ezingama-21: inqubo esebenzayo (2022)
Sebenzisa iseluleko esivela esihlokweni sokuthi ungayishintsha kanjani impilo yakho ibe ngcono ukuze uguqule imibono yakho nendlela yakho yokuphila. Lena indlela ephumelelayo ezokusiza ukuthi uthole injabulo oyithandayo
Ukumiswa okubuthakathaka: Amathiphu angu-3 avela kusazi sezocansi, ukuthi ungasiza kanjani esimweni esibucayi (2022)
Impilo yocansi nokwaneliseka kubalulekile kuwo wonke amadoda. Ukungami kahle emadodeni kuseyinkinga evamile kulezi zinsuku. Uma kukhona ukuqina okubuthakathaka, okufanele ukwenze nokuthi ungabhekana kanjani nalesi sifo - kusho isazi sezocansi uNatalya Yezhova
Ukusondelana ebuhlotsheni besikhathi eside: yini okufanele uyenze ukuze "inhlansi ingaphumi" (2022)
Kunamaqhinga amaningana angasiza ukubuyisela inhlansi ebudlelwaneni kanye nothando lubuyele embhedeni uma imizwa isipholile. Zisebenzele wena, chitha isikhathi esiningi nomlingani wakho futhi ukhumbule izinsuku zakudala ebudlelwaneni benu
Kuyoba okuthakazelisayo kuwe: izigaba ezingu-7 zothando lwabesilisa (2022)
Ubuwazi ukuthi udlula ezigabeni eziyisi-7 ngaphambi kokungena othandweni? Akekho umuntu ongacabanga nge-altare lomshado ngemva kokuhlangana nawe okokuqala. Ake sizwe ukuthi amadoda adlula kuziphi izigaba ngaphambi kokuthi abone ukuthi asuke eseqomile
Isikhathi sokuqala emsebenzini omusha: indlela yokujoyina iqembu (2022)
Ukuzamukela: kungani kwenza impilo ibe ngcono nokuthi ungayifinyelela kanjani (2022)
Ukuze uthole injabulo, udinga ukuqaphela ukubaluleka okungenamibandela kobuntu bakho, ubone ukufaneleka kwakho futhi uyeke ukuzibandakanya ekuzigxekeni okungenanzuzo. Indlela yokwamukela wena kusho u-Inna Miroshnichenko
Ungazithanda kanjani njengoba unjalo ngaphandle kosizo lwesazi sokusebenza kwengqondo? (2022)
Ukuzithanda nokuzethemba kuvela ekuzethembeni, futhi kwabesifazane abaningi, ngeshwa, kubukelwa phansi. Kanye no-Inna Miroshinchenko, sithole ukuthi yini okufanele siyenze ukuze siqale ukuzazisa ngokweqiniso
IMIBUZO EMI-4 OKUMELE abashadile bazibuze yona ngaphambi kokuba babe nezingane (2022)
Ukuhlonipha amadoda: kungani kubalulekile futhi kanjani ukuyibuyisela? (2022)
Ngenhlanhla, yonke into iyashintsha. Ubudlelwano phakathi kowesifazane nendoda nabo buyashintsha. Futhi umbuzo obonakala uyisiphukuphuku wokuthi ungafunda kanjani ukuhlonipha amadoda ususebenza ngokweqile. Sibhekane nalolu daba nongoti wezengqondo
Kuthatha isikhathi esingakanani ukuqeda ukuhlukana? (2022)
TOP 7 amaphutha abesifazane amadoda angawaxoleli (2022)
Kunamaphutha abesifazane okumele ungawavaleli nje amehlo. Kulesi sihloko, sizokhuluma ngamaphutha amakhulu abesifazane amadoda angawathetheleli
Indlela yokubhekana nobuhlungu bokuhlukana: uhlelo lokuvuselela (2022)
Indlela yokuqeda ukwehlukana, indlela yokuqeda ukwehlukana nomuntu omthandayo, indlela yokuqeda ukwehlukana nendoda, indlela yokudlula ngemva kokuhlukana, indlela yokuqeda ukwehlukana nomuntu, amathiphu okuthi ungadlula kanjani ngokuhlukana
Indlela indoda ebonisa ngayo ukungabi nandaba: 7 izimpawu eziyinhloko (2022)
Ucabanga ukuthi indoda iziphatha ngendlela exakile futhi, ngaphezu kwalokho, ngandlela-thile ayinandaba? Hlola isimo sakhe sengqondo ngawe ngalezi zibonakaliso eziyisikhombisa. Thola konke ngobudlelwano bakho
Izingane ezijabule - umama ojabule: ama-hacks empilo ngamaholide omndeni (2022)
Abanye abazali bathanda ukuchitha izimpelasonto nezingane zabo. Abanye bagwema ukuzijabulisa okuhlanganyelwe. Ungachitha kanjani impelasonto nezingane ukuze unikele isikhathi kubo futhi ube nesikhathi sokuphumula? UMarina Aristova uyayazi indlela yokuphuma
Indlela yokwakha ubuhlobo obuqinile nendoda yakho? (2022)
Kungenzeka yini ukugcina ubudlelwano bukhanya njengasezinsukwini zokuqala zokuhlangana? Angakwazi! Sinezeluleko zakho zokuthi ungakha kanjani ubudlelwano obujabulisayo kubabhangqwana
Kuyini ugqozi nokuthi ungakuthola kanjani ngokuthanda? (2022)
Ungafunda kanjani ukudala ubuciko bokudala lapho ukudinga? Yini edala ugqozi, lufika kanjani futhi yini okufanele uyenze uma udinga ukudala, kodwa ungenayo isimo sengqondo esifanele? Ake sibheke lezi zindaba
Akuyona isithukuthezi ngesithukuthezi: indlela yokubhekana nayo nokuthi ungaba kanjani umuntu oyisicefe (2022)
Yini ongayenza lapho ukuphila kuyisicefe. Kuvelaphi ukucikeka nokukhathala kwempilo? Kungani kuyingozi. Indlela yokuqeda isithukuthezi empilweni. Umbhali wohlelo lokusebenza lweselula lokuqala emhlabeni lokuthuthukisa izimpendulo zobuhlakani bemizwa
Ubuhlakani bemizwa buyisisekelo sempumelelo ye-Iron Lady (2022)
I-Emotional intelligence ingumqondo oyimpikiswano. Abanye bakubiza ngokuthi ngokwesayensi ngokwanele, kuyilapho abanye bebona ukuhlakanipha okungokomzwelo njengesihluthulelo sempumelelo kuzo zonke izici zokuphila: kusukela ekukhuphuleni amaholo kuya ebuhlotsheni obujabulisayo, ingabe kunjalo?
Kuyini ubuhlakani bomzwelo futhi kungani kukhula ukubaluleka? (2022)
Sizokutshela ukuthi ubuhlakani bemizwa busebenza kanjani, kungani kungakephuzi kakhulu ukubuthuthukisa, nokuthi yiziphi izinguquko ezinhle empilweni lokhu okungaholela kuzo. Futhi sinikeza uhlelo oluthile lokusebenza
Yini engenziwa futhi engeke yenziwe ngabesifazane ngemva kweminyaka engama-30 (2022)
Lezi zinto zinikezelwe kulabo abashintshe iminyaka eyishumi yesine, kodwa bafuna ukulondoloza ubuhle babo, ubusha kanye nempilo yabo. Omunye ucabanga ukuthi ngemva kwamashumi amane awukwazi ukugqoka izikhindi ezifushane noma ukudansa ubusuku bonke. Ama-stereotypes?
Indlela yokuxazulula izingxabano ukuze ungalethi ubuhlobo onqenqemeni lokuqhekeka? (2022)
Indlela yokujezisa ingane ngendlela efanele: umbono wesazi sokusebenza kwengqondo uDmitry Karpachev (2022)
Lapho ingane ingalaleli, abazali abaningi bayakugwema ukujeziswa ngenxa yesimo sabo esimnene, kodwa lokhu kungazilimaza izingane. Isazi sokusebenza kwengqondo uDmitry Karpachev unikeza ukujwayelana nendlela yokujezisa ingane ngendlela efanele ukuze ingalimazi ingqondo yakhe
Ukuqomisana ku-inthanethi: ukuqaqa nokuphikisa izinganekwane ezi-3 eziyinhloko (2022)
Ukuqomisana nge-inthanethi kokuxhumana nobudlelwano - ingabe kuyiqiniso? Cabanga ngezinganekwane ezidumile ezikhule ngezingosi zokuqomisana, futhi uthole ukuthi imilenze yalezi zinkohliso ezingenangqondo ivelaphi
Kungani imigomo ingafinyelelwa? Izizathu ezi-5 zivela ekhanda nokuthi ungaziqeda kanjani (2022)
Ikhono lokufeza izinhloso zakho liyikhono elibalulekile kubo bonke abantu abaphumelelayo. Thola ukuthi ungafinyelela kanjani umgomo wokuvelela kakhulu nokuthi ungawaphula kanjani amabhlogo asivimbela ukuthi sikwenze
Kuvelaphi ukuzethemba okuphansi futhi kungalungiswa kanjani (2022)
Ukuzethemba okuphansi akukhululekile futhi kuyimbangela yokuqala yokwehluleka kwethu. Ukuqonda izimbangela kusiza ukubhekana nenkinga futhi uqonde ukuthi kunesixazululo, ngaphezu kwalokho, kuyisisekelo
Ungabuyela kanjani ngokushesha emsebenzini ngemuva kwamaholide: ama-hacks okukhiqiza anamandla (2022)
Kunzima kakhulu ukungena kwimodi yebhizinisi ngemuva nje kwamaholide amade oNyaka Omusha. Sizokutshela nge-post-holiday syndrome nokuthi ungayigwema kanjani, ukuthi ungaya kanjani emsebenzini ngenjabulo futhi ubuyele ngokushesha emandleni okusebenza
Ukuhlaselwa nokwesaba kweCoronavirus: ukuthi ungabhekana kanjani nakho (2022)
Kanye nodokotela wezengqondo u-Elena Matushenko, sichaza ukuthi ubuchopho businda kanjani kwisifo se-coronavirus nokuthi ungabhekana kanjani nokunganaki nokuhlaselwa ukwethuka okwenzeka ngemuva kokululama
"Angifuni lutho": kuyini ukunganaki futhi kuyingozi kanjani (2022)
Kwenzeka kanjalo - konke kubonakala kuhlelekile, kodwa awufuni neze lutho, akukho ugqozi, futhi imicabango mayelana nesimiso ibangela cishe ubuhlungu bomzimba. Indlela yokuqeda ukunganaki futhi uhlale ungumuntu, kusho isazi sokusebenza kwengqondo
Indlela yokubhekana nomngane ozama ukubukeka kahle kakhulu ngezindleko zakho (2022)
Umona, uzama ukukudlula kukho konke … Lokhu akubona ubungane besifazane, futhi kungcono ukuhlala kude nabangane abanjalo. Indlela yokuqonda lapho umncintiswano onempilo uphela futhi isifiso sokudla i-ego yakho siqala ngezindleko zomunye umuntu? Ake sikuthole